Xildhibaano ka tirsan mucaraadka Nasa oo doonaya in isbedel lagu sameeyo dastuurka – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaano ka tirsan mucaraadka Nasa oo doonaya in isbedel lagu sameeyo dastuurka
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta urur weynaha mucaaradka Nasa ayaa gaashaanka u daruuray soojeedin ka timid madaxweyne ku xigeenka wadanka William Ruto oo ahayd inaan isbedel lagu sameeyn nidaamka dalka lagu maamulo.
Dr. William Ruto ayaa arrinkan ka hadlay xilli uu khudbad ka jeedinayay daarta Chatham House ee magaalada London ee dalka ingiriiska.
William Ruto ayaa sheegay inaynan suurtagal ahayn in sannadkan tirakoob qaran la sameeyo , sannadka soo socdo dib u eegis lagu sameeyo xuduuda , sannadka 2022-ka ay dhacdo doorasho guud intaasi ka horna afti loo qaado dastuurka wadanka u degsan.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in su’aasha isweydiinta mudan ay tahay Kenya ma haysataa kheyraad ku filan oo dhammaan arrimahaasi loo adeegsan karo.
Hasa ahaate guddoomiyaha xisbiga ODM John Mbadi, xoghayaha guud , Edwin Sifuna , dhigiisa Ford Kenya Eseli Simiyu, xildhibaanka degaan baarlamaneedka Rarieda Otiende Amollo iyo kuwo kale ayaa dhaliilay hadalka ka soo yeeray Ruto.
Mr. Mbadi ayaa sheegay inaan waqti xaadirkan loo baahnayn dood ku saabsan afti loo qaado dastuurka.
Waxaa uu intaasi ku daray in ku xigeenka madaxweynaha dalka laga doonayo inuu xoogga saaro sidii loola dagaallami lahaa musuqmaasuqa si dowladda uu ugu soo haro qarashaad lagu maareyn karo aftida.
Guddoomiye ku xigeenka xisbiga Wiper Mutula Kilonzo Junior ayaa dhankiisa sheegay in walaaca uu William Ruto ka muujiyay arrimaha aftida ay yihiin kuwo jira oo la doonayo in si gaar ah loo tixgeliyo.
Xoghayaha dhanka saxaafadda ee William Ruto, David Mugonyi, ayaa dhankiisa sheegay in xubnaha mucaaradka ay xor u yihiin inay dareenkooda muujiyaan maadama wadanka uu ka jiro hannaan dimuqaradiyadeed oo fursad siinaya xuriyatul qowlka.
Weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan isbedelka la doonayo in lagu sameeyo dastuurka, barasaabka ismaamulka Machakos Dr. Alfred Mutua ayaa hoosta ka xariiqay in xisbiga uu hoggaamiyo ee MCC uunan taagereynin in la bedelo sharciga wadanka laga isticmaalo.
Dr. Mutua ayaa ka soo horjeestay in meesha laga saaro xaddidaada ku aaddan muddo xileedka madaxweynaha ama guddoomiyaasha maamul goboleedyada maadaama sida uu hadalka u dhigay tani ay horseedi karto nidaam dikteetar ama kali talisnimo ah.
← Dadka wax Tahriibiyo ee deegaanada Puntland ku sugan oo digniin loo diray.
Hay’adda xuquuqul aadanaha ee Amnesty oo walaac ka muujisay haweeney la waayay →